mai 2019 · déliremadagascar
Socio-eco	 31 mai 2019 lynda
BABY SHOPPING: Manomboka amin’ny 1000 Ariary ny kojakoja ho an’ny zazakely
Kojakoja ho an’ny zazakely sy ny ankizy amin’ny vidiny mirary sy tsara kalitao no amidy mandritra ny Baby Shopping. Manomboka amin’ny 1000 Ariary izany. Continuer la lecture →
FIKAMBANANA AFAMPO: “Hanandratra ny olombelona amin’ny maha olona azy”
Tsy ny tontolo iainana ihany no simba eto Madagasikara fa ny tontolom-piarahamonina ihany koa, hoy ny filohan’ny fikambanana AFAMPO (Antoky ny Fanabeazana ny Mponina), Tavandrena Paulin. Continuer la lecture →
Anisany mpanohana ny FEPA ny orinasa Manda SA sy ny restaurant Manda Sea Food. Ho hita mandritra ny efatr’andro ireo hazandranomasina manta, voakirakira araky fenitra iraisampirenena nahafantarana ny orinasa hatramin’izay. Continuer la lecture →
“Fototry ny fampandrosoana maharitra ny fiompiana, ny jono ary ny fambolena”. Io no lohahevitra iompanan’ny tsenaben’ny fiompiana, ny jono ary ny fambolena (FEPA). Continuer la lecture →
Socio-eco	 29 mai 2019 R Nirina
Mikarakara tsenabe ho an’ny ray aman-dreny sy ny zaza ny Prima Baby isaky ny fanamarihana ny iray volan’ny ankizy. Ho tanterahana ny zoma 31 mey sy ny sabotsy 1 jona 2019 eny amin’ny Skate Park Antanimena manomboka amin’ny 9 ora maraina ka hatramin’ny 5 ora hariva ny andiany faha-7 ny Baby Shopping. Continuer la lecture →
Sport	 29 mai 2019 lynda
FANOHANANA NY BAREA: Namaly ny antso ireo mpiara-miombon’antoka hafa
Hilalao am-pitoniana ny Barea mandritra ny lalao iadiana ny tompondakan’i Afrika eo amin’ny lalao baolina kitra (CAN 2019), atao any Egypte. Continuer la lecture →
LA TRILOGIE DE LA JUSTICE : Prestation de serment de trois nouveaux Experts judiciaires
Trois nouveaux Experts ont prêté serment le 24 mai 2019 à la Cour d’Appel d’Antananarivo. Continuer la lecture →
Socio-eco	 27 mai 2019 lynda
MPIASAN’NY FARITRA BONGOLAVA: Efa ho dimy volana tsy nandray karama
Tsy nandray karama nandritra ny 5 volana ireo mpiasa 20 eo anivon’ny Faritra Bongolava. Mpiasa tsy raikitra (ECD) miisa 20 no tsy nahazo ny tambim-karamany nanomboka ny volana janoary no mankaty. Continuer la lecture →
Tsy ao anaty lisi-pifidianana kanefa efa nifidy tamin’ny fifidianana filohampirenena 2018. Nahitana tranga tahaka izany teny amin’ny biraom-pifidianana EPP Ambatofotsy Gara, kaominina Tsiafahy ny marainan’ny fifidianana solombavambahoaka, ny 27 mey 2019. Continuer la lecture →
Socio-eco	 25 mai 2019 lynda
Manararaotra ny mpangalatra rehefa vory vahoaka. Mpangalatra entana roa no tratra tao amin’ny hetsika ara-barotra Grande Braderie de Madagascar, teny amin’ny Lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Continuer la lecture →